Indlu yaseFarrow-Imbali yaseNelsonville.
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguSherri
USherri ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Ikhaya eliMhle leVictorian, amanyathelo kude neHocking Valley Scenic Railroad, iRocky Boot Outlet, Indlela yeBhayisekile yeHocking-Adena kunye neMbali yoLuntu yaseNelsonville, eOhio. IYunivesithi yaseOhio ikwimizuzu eli-15 kude kwaye iHocking College ikwimizuzu emi-5 kude. Eli khaya linayo yonke into oya kuyidinga iveki ende okanye ukubaleka impelaveki nosapho okanye iqela elikhulu labahlobo. Umlambo iHocking ulapha kumgangatho ongasemva. Ifanelekile ukuzonwabisa ngaphandle okanye nje emva kwemini yokuphumla. Akukho maqela
Ikhaya libonelela ngekhitshi eligcweleyo elinesitovu, isikhenkcisi, umatshini wokuhlamba izitya, iMicrowave, iToaster, imbiza yekofu, iimbiza neepani, izinto zokupheka, kunye nezitya ezintle. Iwasha, Isomisi, kunye nesepha yokuhlamba. Sibonelela ngayo yonke into oyifunayo ukuze uqiniseke ukuba ukubaleka kwakho akukhathali kangangoko. Sibonelela ngazo zonke iitawuli kunye neelinen, kunye neziseko zeBathroom. Onke amagumbi okulala akumgangatho wesibini kunye negumbi lokuhlambela. Indawo yokungena inefoyer entle, igumbi lokutyela elisemthethweni kunye negumbi lokuhlala. Ubushushu kunye ne-Air conditioning iyabonelelwa. Wifi iyafumaneka kunye Cable TV. Kukho iindawo ezininzi zokutya zasekuhlaleni.
INelsonville yidolophu eyimbali kunye nekhaya leHocking Valley Scenic Railroad kunye neRocky Boot outlet. Isikwere sikawonke-wonke seMbali, umgaqo kaloliwe kunye neebhutsi zaseRocky zonke zihamba umgama ukusuka ekhaya. Indlela yebhayisekile yeHocking-Adena isekupheleni kwendlela yethu yokuqhuba. Eli khaya lakhiwa malunga ne-1905 nguJohn Farrow. Iintsapho ezininzi bezinalo ikhaya ukusukela oko kodwa ekugqibeleni laphelela ezandleni zoMyeni wam uJeff McDonald oye wabuyisela eli khaya ngesandla. Ihlala ingumsebenzi oqhubekayo, kodwa uyala ukunikezela. Uyayibona indlela umyeni wam azingca ngayo ngomsebenzi wakhe wekhaya lonke.
Siya kuba nonxibelelwano oluncinci kakhulu nondwendwe, kodwa ukuba uyasifuna singumyalezo nje. Sihlala ekuhlaleni ukuze sime ngorhatya lokungena ukuze siqinisekise ukuba yonke into ilungile kwaye sibone ukuba unayo nayiphi na imibuzo.